I-Oyster Peptide Powder-Umzi mveliso wababoneleli
Oyster peptide inentaphane yeprotein, ivithamin, ukumodareyitha kwe-microelement kunye ne-turbine. Ngaphandle koko, inezinto ezininzi …….
Aukuguquka Isiselo, isongezelelo sempilo yamadoda, ukuXhomekeka kwesini esingafanelekanga, ukutya kwempilo, ukutya okongeza ukutya, njl.
I-Oyster Extract ibonelela ngomthombo wendalo ngokupheleleyo we-glycogen, i-phospholipids, iivithamini zaselwandle kunye neeminerali kunye nomthombo otyebileyo we-amino acid taurine. Ukukhutshwa kweoyster kuthathwa njengoncedo ngokukodwa ekucoceni umzimba kunye nesibindi, ngokukhuthaza ukugcinwa kwenyongo kunye nokwenza umsebenzi wayo ukuba ube bhetele. Ukukhutshwa kweoyster kuye kwasetyenziswa kangangeenkulungwane njenge-aphrodisiac ukuphucula amandla okuzala kwamadoda. Ukukhutshwa kweoyster kuye kwasetyenziswa kangangeenkulungwane njenge-aphrodisiac ukuphucula amandla okuzala kwamadoda.
I-Oyster Peptide powder inokuphucula ngokufanelekileyo ukusebenza kwamadoda ngokwesini. Ngelixa ulawula ukusebenza komzimba kunye nokuphucula ukusebenza komzimba okunesondlo.
I-Oyster glycosaminogly inokukhusela kumonakalo we-oxidative weeseli ze-endothelial zeeseli ezibangelwa yi-hydrogen peroxide, kwaye inokuthintela ngokufanelekileyo ukubakho kwezifo zentliziyo ezinje ngoxinzelelo lwegazi, i-arteriosclerosis, ukubetha kunye nokunye okunje ngenxa yokwenzakala kwe-vascular endothelial.
I-Ouster peptide powder ifake kwisiselo, isongezo sempilo yamadoda, isongezo sesini sokunganyaniseki, ukutya kwezempilo, ukutya okongeza ukutya, njl.